समाचार-प्याकेजि Co्ग गुणांक घर्षण र विलायक मुक्त लेमिनेशन मा विरोधी ब्लक समस्याहरु को विश्लेषण
पैकेजिंग गुणांक घर्षण र विलायक मुक्त टुक्रा टुक्रा विरोधी ब्लक समस्याहरु को विश्लेषण
विलायक मुक्त ल्यामिनेशन बजार मा परिपक्व भएको छ, मुख्यतः प्याकेजि enter्ग उद्यमहरु र सामग्री आपूर्तिकर्ताहरु को प्रयास को कारण, विशेष गरी शुद्ध एल्युमिनियम लेमिनेशन टेक्नोलोजी को लागी व्यापक रूप मा लोकप्रिय भएको छ, र परम्परागत विलायक को प्रतिस्थापन को वातावरण को स्थिति मा एक ठूलो कदम उठाएको छ- आधार टुक्रा टुक्रा र extruded टुक्रा टुक्रा उत्पादन। प्याकेजि enter्ग उद्यमहरु उपकरण, संचालन, कच्चा माल, गुणस्तरीय टेक्नोलोजी र उपयोग मा उत्पादनहरु को बिभिन्न शर्तहरु को कारण विभिन्न गुणस्तरीय समस्याहरु बाट घेरिएका छन्। यो कागज एक अवस्थित समस्या को बारे मा कुरा गर्नेछ, अर्थात्, पाउच खोल्न को लागी क्षमता र यसको चिकनाई।
उदाहरण को लागी, एक नियमित तीन परत extruded polyethylene फिल्म कोरोना परत, मध्य कार्यात्मक परत र तल थर्मल सील परत बाट बनेको छ। सामान्यतया, खोल्न र चिकनी additives तातो सील तहमा थपिएका छन्। चिकनी additive3परतहरु को बीच हस्तान्तरण गरीएको छ, र additive खोल्न छैन।
एक तातो सील सामग्री को रूप मा, खोल्न र चिकनी additives आवश्यक छ जब लचीलो प्याकेजि comp्ग कम्पोजिट उत्पादन। तिनीहरू अनिवार्य रूप बाट फरक छन्, तर धेरै जसो प्याकेजि manufacturers्ग निर्माताहरु गलत छन् कि उनीहरु एउटै हुन्।
सामान्य खुल्ने additive व्यावसायिक रूप मा उपलब्ध सिलिकन डाइअक्साइड हो, जो एक अकार्बनिक पदार्थ हो कि फिल्म को चिपचिपाहट को प्रतिरोध लाई बढाउन सक्छ। केहि ग्राहकहरु लाई सधैं थाहा छ कि थैली को दुई परतहरु उनीहरु को बीच धुलो लाग्छन्, बस दुई गिलास जस्तै कि ओवरलैप। तपाइँ देख्नुहुनेछ कि यो खोल्न र पुछ्न को लागी चिकनी छ, जुन सामान्यतया additives खोल्न मा कमी छ। र पनी केहि फिल्म निर्माताहरु यसलाई प्रयोग गर्दैनन्।
सामान्य चिकनी additive Erucic एसिड एमाइड हो, जो सेतो पाउडर हो कि प्राय: विलायक आधार टुक्रा टुक्रा प्रक्रिया मा टुक्रा टुक्रा रोलर र गाइड रोलर को पालन गर्दछ। यदि विलायक मुक्त laminating प्रक्रिया को समयमा चिकनी एजेन्ट को एक धेरै थपिएको छ, कोइना तापमान मा वृद्धि बृद्धि को रूप मा कोरोना परत को तितरबितर हुनेछ, कम छीलने शक्ति मा परिणामस्वरूप। मूल टुक्रा टुक्रा पारदर्शी पीई फिल्म सेतो संग peeled, ऊतक संग बन्द गर्न सकिन्छ। त्यहाँ विश्लेषण र परीक्षण को लागी एक तरीका छ कि कम पीलिंग शक्ति चिकनी additives को एक धेरै बाट प्रभावित छ, कम शक्ति टुक्रा टुक्रा फिल्म एक ओवन मा minutes० मा पाँच मिनेट को लागी राखेर, र त्यसपछि शक्ति परीक्षण। यदि यो धेरै बढ्छ, यो अनिवार्य रूप बाट छीलो शक्ति मा कमी धेरै चिकनी एजेन्ट को कारण हो कि निष्कर्ष निकालेको छ।
विलायक आधार टुक्रा टुक्रा को रिवाइन्ड संग तुलना, विलायक मुक्त टुक्रा टुक्रा विधि additive स्थानान्तरण र फैलावट प्राप्त गर्न धेरै सजिलो छ। विलायक मुक्त laminating रिवाइन्ड को न्याय गर्न को लागी सामान्य तरीका जाँच गर्न को लागी कि उनीहरु कम्पैक्ट र सफा छन् पर्याप्त विलायक मुक्त चिपकने को एक राम्रो माध्यमिक चिकनी प्रवाह को अनुमति दिन को लागी हो। उच्च दबाव फिल्म रोलर फिट, अधिक फिसलन additive टुक्रा टुक्रा तह, वा यहाँ सम्म कि मुद्रण तह मा माइग्रेट सम्भव छ। तसर्थ, हामी यस मुद्दा को बारे मा भ्रमित रहन्छौं। हामी के गर्न सक्छौं, क्युरिंग टेम्परेचर घटाउने, कोटिंग तौल घटाउने, फिल्म लाई ढिलो, र बारम्बार चिकनी additives जोड्नुहोस्। तर माथिको राम्रो नियन्त्रण बिना, चिपकने वाला निको पार्न गाह्रो छ र पानी राख्छ। धेरै धेरै additives न केवल प्लास्टिक थैली को छीलो शक्ति लाई प्रभावित गर्दछ, तर यो पनि यसको तातो सील प्रदर्शन लाई प्रभावित गर्दछ।
KANDA नयाँ सामाग्री चिपकने को एक श्रृंखला यी समस्याहरु को समाधान को लागी जारी गरीएको छ। WD8117A / बी डबल घटक विलायक मुक्त चिपकने एक राम्रो सिफारिश हो। यो एक लामो समय को लागी ग्राहकहरु द्वारा प्रमाणित गरीएको छ।
घर्षण को मूल गुणांक
घर्षण को टुक्रा टुक्रा गुणांक
०.१ ~ ०.१५
WD8117A / B गरीब छीलो शक्ति र थर्मल सील प्रदर्शन को समस्या लाई हल गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ सतह को अत्यधिक चिकनी additives को लागी उनीहरुलाई कम गर्न को लागी मूल फिल्म निर्माता को आवश्यकता बिना।
थप रूपमा, WD8117A/B दुई थप गुणहरु छन्:
१. OPP / AL / PE को पिलि strength्ग शक्ति ३.५ N भन्दा माथि छ, नजिक वा केहि विलायक आधार टुक्रा टुक्रा चिपकने भन्दा धेरै।
2. छिटो उपचार। सुझाव शर्तहरु को तहत, टुक्रा टुक्रा फिल्म लगभग 8 घण्टा को उपचार अवधि छोटो, जो भारी उत्पादन दक्षता बढाउन सक्छ।
संक्षेप मा, समग्र फिल्म को घर्षण गुणांक को अन्तिम निर्धारण फिल्म र स्टील प्लेट को बीच स्थिर घर्षण गुणांक मा आधारित हुनुपर्छ। गलत धारणाहरु कि यो एक थैली खोल्न को लागी गाह्रो छ किनकि त्यहाँ पर्याप्त स्मूथिंग additives पहिचान र सही हुनु पर्छ। हामी मात्र प्रत्येक सारांश र अपडेट को माध्यम बाट स्थिरता र उच्च लचीला प्याकेजि products्ग उत्पादनहरु प्राप्त गर्न सक्छौं।